Budata Whatsapp Video Optimizer maka Winphone
Budata Whatsapp Video Optimizer
Ikpo okwu: Winphone Asụsụ: Bekee
Free Budata maka Winphone (1.00 MB)
Budata Whatsapp Video Optimizer,
WhatsApp Video Optimizer bụ ngwa Windows Phone dị mfe nke na-arụ ọrụ nke ọma, emebere ya iji hụ na ndị ọrụ WhatsApp adabereghị na oke nha mgbe ha na-eziga vidiyo.
WhatsApp Messenger, nke na-enye anyị ohere izigara ndị anyị hụrụ nanya ozi nefu, so na ngwa anyị na-ejikarị na mkpanaka. Ngwa a, nke na-ewu ewu nụwa niile, enweghị mmejọ ya. E.g.; Mgbe ịchọrọ izipu vidiyo, ịkwesịrị ịṅa ntị na nha ya. Ọ bụrụ na nha vidiyo gị karịrị 16 MB, naanị isi vidiyo gị ka a na-eziga kama vidiyo niile. Ngwa WhatApp Video Optimizer, nke ị nwere ike ibudata ma jiri na Windows Phone gị, bụ ngwa dị mfe ma dị irè a kwadebere maka ndị nwere nsogbu a. Ngwa ahụ, nke bụ nefu, na-ebuli vidiyo ị na-eziga site na WhatsApp wee bufee vidiyo gị niile na ndị ọzọ.
Ngwa WhatsApp Video Optimizer, nke dị naanị na ikpo okwu Windows Phone, ka emebere ka onye ọ bụla jiri ya mee ihe. Naanị ihe ị ga - eme bụ ịhọrọ vidiyo gị site na ịpị bọtịnụ Họrọ vidiyo (Ị nwere ike họrọ ihe karịrị otu vidiyo), wee pịa bọtịnụ ebuli vidiyo. A na-emecha usoro ntụgharị vidiyo nime obere oge na ngwa WhatsApp ga-emepe na-akpaghị aka. Naanị ihe ị ga - eme bụ kesaa vidiyo ahụ.
Ọ bụrụ nịrapagidesi ike na oke nha mgbe ị na-eziga vidiyo na WhatsApp, WhatsApp Video Optimizer bụ ngwa pụrụ iche nke ga-edozi nsogbu gị.
Whatsapp Video Optimizer Ụdịdị
Ikpo okwu: Winphone
Mmepụta: Virgil Wilsterman